Hawaii COVID-19 Cudurrada: Hal Diiwaan Gelin Kadib Mid Kale
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii COVID-19 Cudurrada: Hal Diiwaan Gelin Kadib Mid Kale
Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hawaii COVID-19 Infekshannada oo sii kordhaya
Dalxiiska Hawaii wuu kobcayaa, sidoo kale COVID-19 wuxuu ka mid yahay kuwa aan la tallaalin sidii hore oo kale. Iyadoo 243 caabuq oo cusub oo coronavirus ah, ayaa Aloha Gobolku wuxuu ku jiraa dhibaato weyn.
Kiisaska cusub ee COVID-19 ee Hawaii ayaa sii kordhaya oo maalin walba kor u kacayay muddo toddobaad ka badan.
Isugeynta boqolleyda dadka hadda lagu tallaalay gobolka, Hawaii waxay aragtaa caabuqyo cusub oo ka badan labanlaab maalintii la duubay tan ugu sarreysa tan iyo masiibada.
Kordhinta noocan oo kale ah ee kiisaska cusub, mid ayaa laga yaabaa inuu u maleeyo inay tahay waqtigii dib loogu soo celin lahaa waajibaadka safarka, laakiin ilaa hadda dawladdu waxba iskama beddelin.
Ka -jaridda kuwa hadda lagu tallaalo gobolka (60 boqolkiiba), 243 cudur ayaa fidin doona si loola jeedo ku dhowaad 700 caabuq oo ku saleysan tirooyinkii sanadkii hore ka hor intaan tallaalku dhicin.
Maalintii ugu xumeyd tan iyo markii uu faafay masiibada waxay ahayd Ogosto 27, 2020, iyadoo 371 xaaladood oo cusub maalin walba. Laakiin iyada oo ku saleysan xaqiijinta kuwa la tallaalay, maanta waxay ahayd kororkii ugu badnaa ee abid la diiwaan geliyo caabuqyada cusub, iyo madaxda dalxiiska ayaa aamusan.
Huteelada, makhaayadaha, iyo dukaamada ayaa buuxa. Ma jirto meel u bannaan xeebaha caanka ah, sida Waikiki Beach, si ay u helaan meel shukumaanadaada.
Ma jiraan dad imanaya oo caalami ah, laakiin soo -galayaasha gudaha ee is -biirsaday ayaa diiwaangeliya imaanshayaal ka badan kuwii hore ka hor masiibada.
Heerarka caabuqa coronavirus ee Hawaii wuxuu gaadhay saddex -laab lambar 8 -dii maalmood ee la soo dhaafay wuxuuna kor u kacayaa maalin kasta.
146 xaaladood oo cusub ayaa laga diiwaangeliyey Degmada Honolulu, 50 ee Gobolka Hawaii, 14 Maui County, iyo 8 ee Kauai County.
Qiyaastii 78 boqolkiiba kiisaska bisha Luulyo ayaa ka yimid fiditaanka bulshada, 20 boqolkiiba dadka deggan ee ka soo noqonaya safarka, iyo 2 boqolkiiba safarka dadka aan degganayn.
Diiwaan -geliyayaasha dalxiiska ee diiwaangashan waxaa laga yaabaa inay haystaan ​​kaliya boqolkiiba 2 sabab, taas oo war wanaagsan u ah dhaqaalaha, laakiin tiradaas oo korortay, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii dib loo rogi lahaa xayiraadaha.
Markii ugu dambeysay ee Hawaii ay si buuxda u xirneyd iyadoo tirada kiisaska cusub la arkay. Maanta ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta dowladda.
Laga soo bilaabo Luulyo 8, 2021, booqdayaasha si buuxda loo tallaalay mar dambe ma aha inay ka walwalaan bixinta baaritaanka PCR ee taban si looga fogaado 10 maalmood oo karantiil ah, iyo in ka badan 30,000 oo qof oo imanaya maalintii, isbeddelkan xannibaadaha safarka ayaa muujinaya.
Waxaa jira booqdayaal badan oo ku sugan Hawaii hadda marka la barbardhigo 2019. Haddii aad waddo socod ama wadid waddada Kalakaua ee Waikiki, kaliya qiyaastii boqolkiiba 5 dadka ayaa xiran maaskaro. Hase yeeshe, tiro aad u badan oo kiisas cusub ah, ma jiro hal jaad oo ka socda Guddoomiyaha si loogu amro mar labaad xirashada maaskaro.
Hawaii waxay la socotaa isbeddel ka dhacay Maraykanka oo ah in dadku ay ka dheregsan yihiin oo maskax ahaan ay iska difaaci karaan. Mar dambe ma daryeelaan inay is-qariyaan, taas oo noqon doonta tan keliya ee ka-hortagga COVID-19 marka laga reebo in si buuxda loo tallaalo. Tani waa maskax waxyeello leh iyo horumar khatar ah.